Reuzel - Extreme Hold Matte Pomade 4oz | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Best Sellers › Reuzel - Extreme Hold Matte Pomade
Reuzel - Extreme Hold Matte Pomade
Regular price MMK 23,000
Normal (4oz/113g) - MMK 45,000 MMK Big (12oz/340g) - MMK 115,000 MMK Travel (1.3oz/35g) - MMK 23,000 MMK
--Extreme Hold | Natural Matte Finish | Hybrid Pomade--
2019 ခုနှစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး Pomade ခေါင်းလိမ်းဆီဆုရှင် (by AskMen)
ထိန်းအားအကောင်းဆုံးထဲကမှ လိုချင်သူတို့အတွက် ဆံပင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၊ ဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုး တို့နဲ့သင့်တော်ပြီး အကောင်းတကအကောင်းဆုံး Extreme Hold ထိန်းအား နှင့် သဘာဝဆန်ဆန် ဆံပင်အရောင် Natural Matte Finish ကိုပေးစွမ်းနိုင်ကာ၊ ခြောက်ကပ်ခြင်းများမရှိပဲ ချောချောမွေ့မွေ့ ပုံသွင်းစေနိုင်မည့်...
Reuzel - Extreme Hold Matte Pomade သည် Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ အလွန်ကောင်းသော Extreme Hold ထိန်းအားနှင့် သင့်ဆံပင်ပုံစံကို တာရှည်ခံစေရုံသာမက ပုံသွင်းရအလွန်ကောင်းစေပါသည်။ ဘီးကိုအသုံးပြုပြီးလည်း ဆံပင်ကောက်သားကိုပြေစေနိုင်ပါသည်။
ဆံပင်ကို အလွန်အမင်းမာတောင့်ခဲသွားစေခြင်းမရှိသလို၊ အချိန်နေရာမရွေး ဆံပင်ပြန်ပြင်နိုင်ပြီး၊ ခေါင်းလျှော်ရလဲလွယ်ကူသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသော ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
အကောင်းတကအကောင်းဆုံး Extreme Hold ထိန်းအား
သဘာဝဆန်ဆန် ဆံပင်အရောင် Natural Matte Finish
Sugary Rum ရနံ့
The name says it all. Reuzel - Extreme Hold Matte Pomade for men provides the strongest hold andamatte finish. This long lasting, water based formula is easy to wash out of hair and won’t leave build up behind. It’s 1 better than 10, it’s an 11!
Tames Wavy Hair
Sugary Rum Fragrance